Imbali emfutshane ye-Atomic Theory
I-atomic theory ichaza uhlobo lwama-athomu, ibhloko yokwakha yomcimbi. u-artpartner-images / Getty Izithombe
I-atomic theory yenzululwazi yenzululwazi yemeko yee-athomu kunye nomba . Idibanisa izinto ze-physics, chemistry kunye neemathematika. Ngokweengcamango zanamhlanje, umcimbi wenziwe ngeengqungqutyana ezincinci ezibizwa ngokuba ngama-athomu, okwakusenziwa ngama -particle subatomic . I-Atom zento ewanikwayo zifana neendlela ezininzi kwaye zihluke kwii-athomu zezinye izinto. I-Atom zidibanisa ngokulingana kunye namanye ama-atom ukwenza iimolekyuli kunye nezixhobo.
Iingcamango ziye zashintsha ngokuhamba kwexesha, ukusuka kwifilosofi ye-atom ukuya kwi-mechanic ye-quantum. Nantsi imbali emfutshane ye-atomikiyori.
Le ngcamango yavela njengengcamango yefilosofi kwi-Indiya naseGrisi yamandulo. Igama le-atom livela kwi- Atomos yegama lesiGrike elidala , elithetha "ukungabonakali". Ngokwe-atom, umbandela owenziwe ngama-particle discrete. Nangona kunjalo, le ngongoma yayingenye yeenkcazo ezininzi zengxaki kwaye yayingekelwe kwiinkcukacha zobungqina. Ngenkulungwane yesihlanu BC, uDemokritus wachaza umcimbi owawungenakonakala, iiyunithi ezingabonakaliyo ezibizwa ngokuba ngama-athomu. Umlobi waseRoma uLucretius wabhala ingcamango, ngoko yahlala kwiMinyaka yoMnyama ukuze iqwalaselwe kamva.
I-Atomic Theory yaseDalton
Ukufika kwikhulu le-18, kwakungekho ubungqina bokuhlola ukuba kukho i-athomu. Akukho mntu wayesazi ukuba umbandela onokukhawuleza unokwahlukana njani. I-Aeriform / Getty Izithombe
Kwathatha kwada kwaphela ekupheleni kwekhulu le-18 inzululwazi ukubonelela ngobungqina obubungqina bokuba kukho i-athomu. U-Antoine Lavoisier waqulunqa umthetho wokulondoloza ubuninzi ngo-1789, ochaza ukuba ubuninzi beemveliso zempendulo ziyafana nobukhulu bemijondolo. UJoseph Louis Proust ucetyise umthetho wobukhulu obuchanekileyo ngo-1799, ochaza ukuba iindidi zezinto ezikwimeko zihlala zihlala kwizinga elifanayo. Ezi ngcamango azizange zibhekiselele kwii-atom, kodwa uJohn Dalton wakha phezu kwabo ukuphuhlisa umthetho weendlela ezininzi, echaza ukuba ubungakanani bemibutho yezinto ezikwinqanaba lizinombolo ezincinane. Umthetho kaDalton wemilinganiselo emininzi iphuma kwiinkcukacha zovavanyo. Ucebise nganye into eyenziwa ngamakhemikhali aqukethe uhlobo olulodwa lwee-athomu ezingenakonakaliswa naluphi na uhlobo lweekhemikhali. Ingxelo yakhe yomlomo (1803) kunye nokupapashwa (1805) ibonakalise ukuqala kweengcamango zesayensi ye-athomu.
Ngomnyaka we-1811, u-Amedeo Avogadro walungisa ingxaki ngemfundiso kaDalton xa ephakanyisela iindleko ezilinganayo zegesi ngokushisa okulinganayo kunye noxinzelelo olunomlinganiselo ofanayo. Umthetho we-Avogadro wenza ukuba kunokwenzeka ukuba uqikelele ngokuchanekileyo iziqulatho ze-athomu kunye nokucaca kwakukho umahluko phakathi kwama-athomu kunye nama-molecule.
Omnye umnikelo obalulekileyo kwi-atomic theory yenziwe ngowe-1827 ngu-Robert Brown, onguhlaza wezilwanyana, owathi wayibona ingqungquthela yothuli ejikeleza emanzini yayibonakala ihamba ngokungahambi ngesizathu esaziwayo. Ngomnyaka we-1905, u-Albert Einstein wachaza ukunyakaza kweBrowny ngenxa yokuhamba kwamamolekyuli wamanzi. Imodeli kunye nokuqinisekiswa kwayo ngo-1908 nguJean Perrin wayesekela inkolelo ye-athomu kunye ne-particle theory.
Model Pudding Model kunye neRutherford Model
URutherford wacebisa umzekelo weeplanethi yee-athomu, ngee-electron ezijikeleza iisucleus ezifana neeplanethi ezijikeleza inkwenkwezi. I-MEHAU KULYK / ISAYENSI IFOTO YEBHAYIBHILE / i-Getty Izithombe
Kwada kweli nqanaba, ii-athomu zazikholelwa ukuba ziyunithi ezincinci zomcimbi. Ngo-1897, uJJ Thomson wafumanisa i-electron. Wayekholelwa ukuba ii-athomu zahlula. Ngenxa yokuba i-electron ithwele inkokhelo engalunganga, yacetyiswa imodeli yepum pudding ye-athomu, apho iifowuni zazingeniswa kwinqanaba elihle lokufumana i-athomu engathathi hlangothi.
U-Ernest Rutherford, omnye wabafundi bakaThomson, wayengavumelani nomzekelo we-plum pudding ngo-1909. URutherford wafumanisa ixabiso elifanelekileyo le-athomu kwaye ubuninzi balo buninzi beliziko okanye inucleus ye-athomu. Wachaza umzekelo weeplanethi apho ii-electrons zenza i-nucleus encinci ehlawulisiweyo.
Umzekelo weBhohr weAtom
Ngokomzekelo we-Bohr, ii-electrons zidibanisa i-nucleus kumazinga asemandla adibeneyo. UMARKI GARLICK / SPL / Getty Izithombe
URutherford wayekulo ndlela elungileyo, kodwa umzekelo wakhe awukwazi ukuchaza ukuphuma kwezinto kunye ne-absorption of atoms okanye ukuba kutheni ama-electron ayengena kwi-nucleus. Ngowe-1913, i-Niels Bohr yacebisa umzekelo weBohr, othi i-electron ihambisa i-nucleus kuphela kwiindawo ezikude ukusuka kwi-nucleus. Ngokomzekelo wakhe, ama-electrons awakwazi ukuqhubela kwi-nucleus, kodwa angenza izibilini ezininzi phakathi kwamanqanaba emandla.
I-Quantum Atomic Theory
Ngokomxholo we-atomic wanamhlanje, i-electron ingaba yiyiphi na i-athomu, kodwa yinto enokwenzeka kakhulu kumgangatho wamandla. Jamie Farrant / Getty Izithombe
Umzekelo kaBohr wachaza imigca ye-hydrogen, kodwa ayizange iqhubeke nokuziphatha kwee-atom ezinama-electron amaningi. Ukufunyanwa kwamanani amaninzi kwandisa ukuqonda kwee-athomu. Ngo-1913, uFrederick Soddy wachaza i-isotopes, eziyiimo ze-athomu enye into equlethwe ngamanani athile e-neutron. I-neutron yafunyanwa ngo-1932.
ULouis de Broglie wacebisa ukuziphatha okunjengomtsalane wokuhamba kweengqungquthela, u-Erwin Schrodinger wachaza ukusebenzisa iStrodinger's equation (1926). Oku, kukhokelela ekukholweni kwe-Heisenberg engaqinisekiyo (1927), echaza ukuba akunakwenzeka ukuba ngaxeshanye kukwazi ukuba zombini isikhundla kunye nokukhawuleza kwe-electron.
Izixhobo ze-Quantum zikhokelela kwingcamango ye-athomu apho i-athomu iqulethe iincinci ezincinci. I-electron inokufumaneka nakweyiphi na i-athomu, kodwa ifumaneka kunokwenzeka kakhulu kwi-atomic orbital level. Kunoko ke iisombululo zetetyhula yomzekelo kaRutherford, i-theory ye-atomic yanamhlanje ichaza i-orbitals engaba yintsimbi, isilumko esakhiweyo, njl njl. Kwii-athomu ezinomlinganiselo ophezulu wee-elektronon, iziphumo ezichaseneyo ziza kudlala, kuba iinqununu zihamba ngesivinini iqhekeza lesantya sokukhanya. Oososayensi banamhlanje baye bafumana iincinci ezincinci ezenza iiproton, i-neutron, i-elektronon, nangona i-athomu ihlala iyona yunithi encinci yezinto ezingenakuhlukaniswa ngokusebenzisa nayiphi na indlela yamachiza.
I-Point Point yokubilisa i-Point Point
Kutheni Akufanele Uxube iBleach kunye ne-Amoniya
Ubunzima be-Atom kwi-Atomic Abundance Isibonelo seKhemistry Inkinga
Imivuzo yokuThengisa kunye nokuLinganisa iimvavanyo zoVavanyo oluHloniphekileyo
Ingaba Amanzi Akunzima Ukubilisa Ngezinga eliphezulu?
10 Amanqaku NgeGender ngesiSpanish
'I-Summary Gatsby' Summary
Iingxaki zokulungisa i-RC engayi kuhamba
Udlala njani iDayisi yamanga
Ukuqonda: Isipho sesiBini soMoya oyiNgcwele
Abaqhubi abaphezulu be-NASCAR bexesha lonke
Ingqwalasela yeCandelo loPhuhliso kunye noPhuhliso
Ngowe-2017 iBritish Ivulekile: Iimpawu ezixhamlayo zi-Emerge i-Champ emva kwe-Round Round Round
Ukuqonda amaQumrhu aPrayimari kunye neeSekondari kwi-Sociology
Izinto zobugqirha Izinto ezenziwayo eNew Orleans
Imbali yoMhla woMhlaba
AmaTattoos aseItaly ahlala ngonaphakade
Indlela i-Steroid Hormones isebenza ngayo
Uthando lweTaurus kunye neGemini
Iingoma eziLatini eziLwazi ngokuBantu abafudukayo